Aragtida Caadi ahaan, falanqaynta cabbirka walxaha waxay bixisaa saamiga miraha dhexroorka kala duwan; Falanqayntan waxaa lagu samayn karaa labadaba iyada oo la shaandheeyo iyo sdimentation biyaha iyadoo la raacayo sharciga Stokes.
Iyadoo ku xiran xajmiga iyo tirada badarka samaynta wadar ahaan, isku geynta waxaa loo yaqaannaa ganaax, ciid, quruurux ama dhagaxyo. Si kastaba ha ahaatee, wadar ahaan marka la isku daro, dhammaan badarka ka kooban yahay ma wada laha cabbir isku mid ah.
Si tan loo sameeyo, miraha waxaa lagu kala saaraa taxane ah shaandho buul leh.
Falanqaynta cabbirka qaybta Excel Janaayo 19th, 2022Tranquillus
READ Ganacsade Vs Freelance: quraafaad sii socota
horeKu samee khariidad firfircoon leh Excel wax ka yar 1 saac!
socdaTababarka Excel - Kobcinta wax soo saarkaaga Excel
Aamusnaanta heshiiska wadajirka ah, dadka iibinta wax ka iibiya miyey ka faa'iideystaan ​​mushaharka caadiga ah ee shaqo ka joojinta?